Windows ကို Repair လုပ်ဆောင်ခြင်း ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ » Windows ကို Repair လုပ်ဆောင်ခြင်း
By နေမင်းမောင်5:13 AM13 comments
nayla July 19, 2011 at 6:11 PM
ဒီပိုစ့်လေးက မှတ်သားထားသင့် ပါတယ်.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.....
Kyawgyi September 22, 2011 at 7:59 AM
ကိုနေမင်းမောင် ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် က ကွန်ပြူတာ ကို အခုမှ စတင်လေ့လာနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးတာ ကို ကျေးဇူးတင်လို့ မဆုံးနိုင်ပါဘူး ခင်ဗျာ။
wintun October 7, 2011 at 9:49 PM
window7only ? XP also can do? Please
နေမင်းမောင် October 7, 2011 at 10:48 PM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. ကျွန်တော် Windows7အတွက်ရေးပေးထားတာပါခင်ဗျာ..
zawmoewai10 October 16, 2011 at 7:10 PM
Thiha (Agri;) November 30, 2011 at 7:38 PM
ကိုနေမင်းမောင်ရေ ကျွန်တော့စက်က dvd drive (E) ဆိုတာပေါ်မလာတော့ဘူး။ အပိတ်အဖွင့်တော့လုပ်လို့ရတယ်။ ဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူး။ ရှင်းပြပေးပါဦး။
နေမင်းမောင် December 1, 2011 at 8:40 PM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. DVD Drive နဲ့ Mother Board တပ်ထားတဲ့ Sata ကြိုးနဲ့ IDE ကြိုးလွတ်နေလို့ပါအကို ..အဲ့ဒီ ကြိုးတွေကို သေချာပြန်တပ်လိုက်ပါ .. Power Supply နဲ့ DVD Drive တပ်ထားတဲ့ Mloex connector လေးပဲအလုပ်လုပ်လို့ ဖွင့်လို့ပိတ်လို့ရတာပါအကို ..
ကိုနေမင်းမောင် ရေ... ကျွန်တော့်စက်က Advanced Boot option ထဲမှာ... Repair your computer ဆိုတဲ့စာတမ်း မပါဘူးဗျ... safe mode ကနေဘဲ စပေါ်တယ်ဗျ... အဲ့ဒါလေး တစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါအုံး ကျွန်တော် Repair လုပ်ချင်လို့ လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. :)
နေမင်းမောင် March 2, 2012 at 6:12 PM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. ဒီအောက်ကလင့်မှာ ပြထားတဲ့ နည်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်လိုက်ပါအကို .. Windows ခွေတော့ ရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ် ..
ဒေါင်းမင်း May 20, 2012 at 9:00 PM
Anonymous June 30, 2012 at 4:58 AM
you are great .everything u do masterpiece.i respect to u.
နေ လွင်အောင် September 2, 2012 at 9:07 AM
KoThet6930 November 5, 2012 at 11:03 AM
ကိုနေ ရေကျွန်တော. ကတော.Windows7 သုံးတာမကြာသေးပါဘူး usb မှာတပ်သမျှWindows